कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी स्पर्श लामिछानेले बनाए एटीएम मेशिन ! यसरी निस्कन्छ पैसा (भिडियो ) « Np Online TV
कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी स्पर्श लामिछानेले बनाए एटीएम मेशिन ! यसरी निस्कन्छ पैसा (भिडियो )
गोरखा नाम्जुङका विद्यार्थी स्पर्श लामिछानेले एटीएम मेशिन निर्माण गरेका छन् । कक्षा १० मा अध्ययरत लामिछानेले घरेलु सामग्रीबाट एटिएम मेशिन निर्माण गरेका हुन् ।जनशक्ति मावि नाम्जुङका विद्यार्थी लामिछानेले शहिद लखन गाउपालिका स्तरिय विज्ञान प्रदर्शनीमा उक्त एटिएम मेशिन राखेका थिए ।
उनि उक्त प्रदर्शनीमा प्रथम भएका छन् ।त्यस अबसरमा लामिछानेले मेशिनबाट पैसा निकालेर सबैलाई चकित पारेका थिए । एटिएम मेशिन काठ, चुम्बक, टिन, काठ आदि घरेलु सामग्रीको प्रयोग गरि निर्माण गरिएको लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । प्रदर्शनीमा विभिन्न बिज्ञान सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको थियो ।भिडियो :